Waxaan rabaa inaan ku dhejiyo emojis xisaabteyda 'Twitch'. ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Waxaan rabaa inaan ku dhejiyo emojis xisaabteyda 'Twitch'.
Waxaa laga yaabaa 6, 2021 0 comments 350
Mid ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan iyo wararka ka soo baxa barxadda Twitch, waa suurtagalnimada in la dhigo emoticons-ka sheekaysiga tooska looga sii daayo qulqulka, tani waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee xiriirka kuwa raacsan, marka lagu daro inay aad u fududahay isticmaalkeeda iyo wax ku oolkeeda si qulqulka u arki karo ulana xiriiri karo Kuwa raacsan.
Waxyaabaha xiisaha leh ee ku saabsan emoticons-ka ayaa ah in, marka laga reebo awood u yeelashada lagu habeeyo oo loo isticmaalo kanaalka qulqulka iyaga abuuray, waxaa lagu maal-galiyaa astaanta shaqsi ee tan, si ay ula xiriiraan, sidaan horay u sheegnay, kuwa raacsan qaab wax ku ool ah oo madadaalo leh, iyo sidoo kale raaxo leh, maxaa yeelay socodka waa midka abuura iyo wuxuu ku habeeyaa kanaalka uu ku jiro waa midka iyaga sida ugu fiican ugu garanaya heerka macnaha.
Waa inaad maskaxda ku haysaa in sawirada aad dooratay in loo beddelo emoticons ay tahay inay la kulmaan shuruudo gaar ah sida:
CabirkaTani kama yaraan karto 112px ama ka weynaan karto 409px.
Miisaankiisa kama badnaan karto 1MB, tan waxaa lagu cabiray soo dejinta.
Ugu dambeyntii, qaabka waxay noqon doontaa PNG, nidaamku ma taageerayo dadka kale.
Sidee loo abuuraa emoticons:
Abuuritaanka emoticon Twitch waa xarafyo iyo calaamado taxane ah, oo qulqulka isku darsamayaa ugu dambayntiina isu roga sawirro. Waxay yihiin wax lamid ah fariimaha qoraalka ah ee aan u isticmaalno inaan kula xirirno asxaabta, laakiin loo turjuno sawirro qaas ah.
Kanaallo kale waxay adeegsadaan softiweer, iyada oo loo marayo fiilooyinka, si looga dhigo inay ka muuqdaan baahinta tooska ah, ee ay waqtigaas ku sameynayaan sheekadooda. Sidaa awgeed mawjadaha emoticons inta lagu jiro baahinta.
Qalabka 'KappaGen', waa mid ka mid ah kuwa ugu khaaska ah marka la eego kanaallada StreamElements iyo adeegsadayaasha, asal ahaan waxaa loo isticmaalaa in lagu xuso daqiiqad fure u ah gudbinta, waxaa lagu soo bandhigaa shaashadda gudbinta, wax kharash ahna ma leh.
Ayaa heli kara emoticons iyo sida:
Xilligan la joogo in raacayaashu waxay kuxiran yihiin kanaal gaar ah Tani waa markaad awoodi doontid inaad marin u yeelatid emoticons-ka gaarka ah ee kanaalka. Kuwani waa la furi doonaa markii taageerayaashu ay ku soo biiraan kanaalka iyo qulqulka socodka ayaa cusbooneysiiya, ka dib xaqiijinta dabcan.
Haddii aad tahay qof raacsan:
Haddii ay dhacdo inaadan ahayn qulquli waxaad abuuri kartaa emoticons kuu gaar ah oo aad ku isticmaali karto barxad adigoo adeegsanaya barnaamijyo naqshadeysan oo tan ku takhasusay, mid kasta oo ka mid ah wuxuu leeyahay qaab loo isticmaalo, in kasta oo ay isku mid yihiin isku mid ma aha, laakiin iyagu aad ayey u fududahay in la isticmaalo, waxaan soo jeedin karnaa:
Mar alla markii aad iyaga aaminto iyadoo loo eegayo dookhaaga iyo dookhaaga Waxaan kuu soo jeedineynaa inaad iyaga u habeysid, xusuusnow inay kuwani yihiin warqaddaada daboolka ah ee arjiga waxayna kaa sooci doonaan kuwa kale ee isticmaala. Dejinta qaabeynta waxaa lagu siin doonaa adiga aaladda aad u isticmaasho sameynta sawirkaaga.
1 Sidee loo abuuraa emoticons:
2 Ayaa heli kara emoticons iyo sida:
3 Haddii aad tahay qof raacsan:
Sidee looga tirtiraa taariikhda kanaalka Telegram?
Sidee loola wadaagayaa GIFS barta Twitter?